vendredi, 14 septembre 2018 19:27
Cosafa Coup 2018 (vehivavy): Niondrika 2 noho 0 nanoloana an'i Malawi i Madagasikara
Faheresana fanindroany. Izay no vokatra azon'ny Barea Madagasikara tamin'ny lalao roa vitany amin'ny fiadiana ny tompondakan'i Afrika Atsinanana taranja baolina kitra, sokajy vehivavy (Cosafa Coup 2018) tanterahina atsy Afrika Atsimo.
Resin'i Afrika Atsimo tamin'ny isa 2 noho 1 isika tamin'ny lalao voalohany, resy 2 noho 0 indray isika androany nanoloana an'i Malawi.
vendredi, 14 septembre 2018 11:48
Fanaraha-maso ny fifidianana: Hanetsika olona ny 6.050 ny SAFIDY
Hahatratra 6.050 ny mpikambana amin’ny firaisamonim-pirenena sy ny olompirenena tsotra hirotsaka hanara-maso ny fifidianana, hiparitaka any amin’ny 9305 birao-pifidianana amin’ny distrika 34 amin’ny faritra Amoron’i Mania, Analamanga, Atsinanana, Boeny, Sava, Atsimo Andrefana ary Androy.
Ny Sampana Anarahamaso ny Fifidianana Ivon’ny Demokrasia Ifarimbonana SAFIDY dia teraka tao anatin’ny tetikasa FANOA (Fifidianana andraisan’ny Olompirenena andraikitra), izay tohanan’ny vondrona Eoropeana.
vendredi, 14 septembre 2018 11:47
Fandriampahalemana: Tsy iharan'ny sazy izay mamerina ny basy tsy ara-dalana any ampelan-tanany
Hatramin'ity faran'ity volana septambra ity io fepetra io, mifanandrify indrindra amin'ny fankalazana ny volan'ny famindrapo.
vendredi, 14 septembre 2018 09:31
CISCO Toamasina I : 40,46% ny taham-pahafahana BEPC 2018
Nivoaka omaly alakamisy 13 spetambra misandratr’andro ny voka-panadinana BEPC 2018 ho an’ny fari-piadidiam-pampianarana na Cisco Toamasina I. 40,46% ny taham-pahafahana raha 38,77% izany ny taona 2017.
Mpianatry ny CEG de Référence-Bazary, izay sekolim-panjakana natsangana, tamin'ny fitondran'i Marc Ravalomanana, ho an’ireo tsara naoty nandritra ny fanadinana CEPE, no nahazo naoty ambony indrindra 18,89/20.
Mpianatry ny St Joseph de Cluny no nahazo naoty tsara faharoa 18,28/20 ary mbola mpianatry ny “CEG de Référence” ny tsara naoty fahatelo 17,61/20.